That's so good, right?: May 2017
ဒီနေ့လေးဟာ ဘာနေ့လေးလည်း သိကြရဲ့လား……….???
ဒီနေ့ မေလ ၁၇ ရက်နေ့ လေးဟာ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ လိင်တူချစ်တူတွေအပေါ် ကြောက်ရွံ့မုန်းတီးခြင်းကို တိုက်ဖျက်တဲ့ အထိမ်းအမှတ်နေ့လေးဖြစ်ပါတယ်။
အင်္ဂလိပ်လိုတော့ International Day Against Homophobia and Transphobia (IDAHOT) လို့ ခေါ်ပါတယ်……….
ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ပြီးကာလတုန်းက လိင်တူချစ်သူတွေကို စိတ်ရောဂါဝေဒနာရှင်များကဲ့သို့ သတ်မှတ်ကာ အတင်းအကျပ် ဆေးကုသမှုများ ပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။
၁၉၉၀ ခုနှစ် မေလ ၁၇ ရက်နေ့မှာ လိင်တူချစ်ခြင်းသည် ရောဂါမဟုတ်ကြောင်းကို World Health Organization (WHO) မှ ထုတ်ပြန်ကြေငြာခဲ့ပါသည်။
ဒီရက်ကို အစွဲပြုပြီး IDAHOT Day အဖြစ် သတ်မှတ်ကာ ၂၀၀၅ ခုနှစ် မေလ ၁၇ ရက်နေ့မှာစတင်ပြီး ကျင်းပခဲ့ကြပါတယ်။
၂၀၁၃ ခုနှစ် နောက်ပိုင်းမှာတော့ ကမ္ဘာတ၀ှမ်းမှာရှိတဲ့ နိုင်ငံပေါင်း ၁၂၀ ကျော်မှာ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ လိင်တူချစ်တူတွေအပေါ် ကြောက်ရွံ့မုန်းတီးခြင်းကို တိုက်ဖျက်ရေးနေ့ကို ကျင်းပနေကြပြီဖြစ်ပါတယ်…………
ရန်ကုန်မှာလည်း ဒီနေ့ညနေ ၄ နာရီကနေ ၈နာရီအထိ လှည်းတန်းစင်တာ ရဲ့ Promotion Area မှာ ကျင်းပမှာဖြစ်ပါတယ်.............
Hot Line – 09979020465
Posted by Alex Aung at 12:49 PM No comments:
(Alex Aung )
စာကြွင်း ။ ။ အမှီးဝတ္ထုလေးတွေရေးခဲ့ဖူးပါသည်။ ဒီတစ်ပုဒ်ကလည်း ထိုအထဲမှတစ်ပုဒ်ဖြစ်ပါသည်။
(​သူငယ်ချင်းများ....ကျနော် လျှပ်စစ်မီးမရသေးသော နယ်က ရွာတစ်ရွာမှာ ပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ရတာကြောင့် ယခု ၂၀၁၇ခုနှစ် အတွင်း ဇာတ်လမ်းအသစ်၊ ဆောင်းပါးအသစ်များ မရေးနိုင် မတင်နိုင်ခြင်းဖြစ်နေရပါတယ်။ မမေ့သွားနဲ့ဦးနော် ပြန်လာတဲ့အခါ အားပေးပါဦး)
Posted by Alex Aung at 8:37 AM No comments: